ပညာရှိနဲ့ပညာတတ် (အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ လူတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်) - Tameelay
ပညာရှိနဲ့ပညာတတ် (အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ လူတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်)
တစ်ခါသောအခါကသိပ္ပံပညာရှင် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဟာ.သူ့စီးနေတဲ့ကားစက်အခြေနေ မကောင်းလို့ ပြင်နေကြ ကားဝပ်ရှော့ရုံကို သွားပြတာပေါ့……….
မကောင်းတဲ့လိုအပ်မယ့် အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းတစ်ချို့ကို ဖြုတ်ထုတ်ပြီး အသစ်လဲဖို့ပြောတာပေါ့….
အချိန်ပေးပြီး ဖြုတ်တပ်လဲလှယ် ရမှာဆိုတော့…ဝပ်ရှော့စက်ဆရာက သူ့တပည့်တွေကိုခိုင်းထားတုန်း ဆရာကြီးကို..
“ဆရာက ကျွန်တော့်တို့မြို့မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ..ဆိုပဲ….ဟုတ်ပါလားဆရာ…”
“ဒါဆိုရင်…ကျွန်တော်ဆရာ့ကို အချိန်ရတုန်း မေးစရာလေးတစ်ခု မေးစမ်းပါရစေဗျာ….
သူအိမ်ပြင်ဖို့ သံလိုအပ်နေတဲ့အတွက် ကုန်စုံဆိုင်မှာ သွားဝယ်တယ်ပေါ့….
ဆိုင်ထဲမှာ သူရှာနေတဲ့သံကမတွေ့ သူကလည်းဆွံ့အ နေတော့…
ဆိုင်ရှင်ကို လက်တစ်ဖက်က လက်ညိုးနဲ့ လက်မကိုင်တဲ့ပုံစံ လုပ်ပြီး…ကျန်လက်တစ်ဖက်က လက်သီးဆုတ်ပြီး ထုပြတဲ့ပုံစံမျိုး လက်ဟန်နဲ့လုပ်ပြတာပေါ့..”.
“ဆိုင်ရှင်ကလည်း..သူပြတာကို ခေါင်းညိတ်ပြပြီး…တူတစ်လက်သွားယူ ထုတ်လာပြတယ်…
“..အဲဒီဆိုင်ကိုပဲ မျက်မမြင်တစ်ယောက်ဈေးဝယ်ဖို့ ရောက်လာပြန်ပါတယ်….
“ကောင်းပြီး ဆရာ…သူကအဲ့ဒီ ကပ်ကြေးကို ဆိုင်ရှင်နားလည်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဝယ်မယ်ထင်သလဲ ဆရာရေ…”
“လွယ်ပါတယ်ကွာ….သူကတော့ လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလယ်တွေကို ကပ်ကြေးညှပ်ပြသလိုမျိုး ပုံစံလုပ်ပြမှာပေါ့ဗျာ”
ဝပ်ရှော့ဆရာလေးက….”ဆရာရယ်…ပညာရှိတွေ ပညာတတ်တွေဟာ အမြဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့….
အရာရာကို ဖြေရှင်းနိုင်နေကြတယ်လို့ စိတ်ကြီးဝင်နေတတ်ကြတာကိုးဗျာ….”
“နေရာတကာ အမြဲပုံသေယူဆတတ်ကြတယ် သင်ယူထားတဲ့ပညာဥာဏ်တွေ သဘောတရားတွေကိုပဲ
အံမဝင်တဲ့ အတွက်အချက်တွေနဲ့ မရနိုင်တာတွေ အများသားဘဲ….
တကယ်တော့ တချို့ကိစ္စနေရာတွေမှာ ဆင်ခြင်မှုတရား common sense တွေနဲ့ မသုံးကြတာများပါတယ်ဗျာ….”
“ဆရာရယ်….သူကမျက်စိသာမမြင်တာလေး ဆွံ့အနေတာမှမဟုတ်တာ….ကပ်ကြေးတစ်လက်ပေးပါလို့ဘဲ ပြောမှာပေါ့.. ဆရာ….မဟုတ်ဘူးလား….”
Crd : kkw….
တဈခါသောအခါကသိပ်ပံပညာရှငျ စာရေးဆရာတဈယောကျဟာ.သူ့စီးနတေဲ့ကားစကျအခွနေေ မကောငျးလို့ ပွငျနကွေ ကားဝပျရှော့ရုံကို သှားပွတာပေါ့……….
မကောငျးတဲ့လိုအပျမယျ့ အစိတျအပိုငျးပစ်စညျးတဈခြို့ကို ဖွုတျထုတျပွီး အသဈလဲဖို့ပွောတာပေါ့….
အခြိနျပေးပွီး ဖွုတျတပျလဲလှယျ ရမှာဆိုတော့…ဝပျရှော့စကျဆရာက သူ့တပညျ့တှကေိုခိုငျးထားတုနျး ဆရာကွီးကို..
“ဆရာက ကြှနျတေျာ့တို့မွို့မှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျက ပါမောက်ခ..ဆိုပဲ….ဟုတျပါလားဆရာ…”
“ဒါဆိုရငျ…ကြှနျတျောဆရာ့ကို အခြိနျရတုနျး မေးစရာလေးတဈခု မေးစမျးပါရစဗြော….
သူအိမျပွငျဖို့ သံလိုအပျနတေဲ့အတှကျ ကုနျစုံဆိုငျမှာ သှားဝယျတယျပေါ့….
ဆိုငျထဲမှာ သူရှာနတေဲ့သံကမတှေ့ သူကလညျးဆှံ့အ နတေော့…
ဆိုငျရှငျကို လကျတဈဖကျက လကျညိုးနဲ့ လကျမကိုငျတဲ့ပုံစံ လုပျပွီး…ကနျြလကျတဈဖကျက လကျသီးဆုတျပွီး ထုပွတဲ့ပုံစံမြိုး လကျဟနျနဲ့လုပျပွတာပေါ့..”.
“ဆိုငျရှငျကလညျး..သူပွတာကို ခေါငျးညိတျပွပွီး…တူတဈလကျသှားယူ ထုတျလာပွတယျ…
“..အဲဒီဆိုငျကိုပဲ မကျြမမွငျတဈယောကျစြေးဝယျဖို့ ရောကျလာပွနျပါတယျ….
“ကောငျးပွီး ဆရာ…သူကအဲ့ဒီ ကပျကွေးကို ဆိုငျရှငျနားလညျအောငျ ဘယျလိုလုပျပွီး ဝယျမယျထငျသလဲ ဆရာရေ…”
“လှယျပါတယျကှာ….သူကတော့ လကျညိုးနဲ့ လကျခလယျတှကေို ကပျကွေးညှပျပွသလိုမြိုး ပုံစံလုပျပွမှာပေါ့ဗြာ”
ဝပျရှော့ဆရာလေးက….”ဆရာရယျ…ပညာရှိတှေ ပညာတတျတှဟော အမွဲ သူတို့ကိုယျသူတို့….
အရာရာကို ဖွရှေငျးနိုငျနကွေတယျလို့ စိတျကွီးဝငျနတေတျကွတာကိုးဗြာ….”
“နရောတကာ အမွဲပုံသယေူဆတတျကွတယျ သငျယူထားတဲ့ပညာဉာဏျတှေ သဘောတရားတှကေိုပဲ
အံမဝငျတဲ့ အတှကျအခကျြတှနေဲ့ မရနိုငျတာတှေ အမြားသားဘဲ….
တကယျတော့ တခြို့ကိစ်စနရောတှမှော ဆငျခွငျမှုတရား common sense တှနေဲ့ မသုံးကွတာမြားပါတယျဗြာ….”
“ဆရာရယျ….သူကမကျြစိသာမမွငျတာလေး ဆှံ့အနတောမှမဟုတျတာ….ကပျကွေးတဈလကျပေးပါလို့ဘဲ ပွောမှာပေါ့.. ဆရာ….မဟုတျဘူးလား….”
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ရနံ့နှင့်လူ့တန်ဖိုးပါ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းနေရင် အဆင်းမလှသော်လည်း ရနံ့မွှေး နေမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းရင်တော့ မသေခင်တောင် အပုပ်နံ့ထွက်နေတတ်တယ်။ လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ပဲ ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားပါစေ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းရင်တော့ အရောင်လက်နေသော်လည်း တန်ဖိုးမဲ့နေအုံးမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်သင်း ရနံ့ဆိုးကို အမွှေးအကြိုင်နဲ့ ဖုံးကွယ်လို့ရတတ်ပေမယ့် ကိုယ့်တန်ဖိုးနဲ့ …
သင့်ကောင်လေး ဒီ (၁၀) ချက်ကို ပြုလုပ်နေတာ၊ သင့်ကို အမှန်တကယ် မချစ်လို့ပါ !
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်နှစ်လိုကြတယ်ဆိုတာ တကယ့်တော့ အံ့သြပီတိဖြစ်စရာ ခံစားချက်လေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီခံစားချက်လေးရဖို့ သင်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အတင်းတိုက်တွန်းလို့မရပါဘူး။ တကယ်လို့များ သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ တွဲနေပြီး အဲ့ဒီခံစားချက်ကို ခံစားနေရပေမယ့် တစ်ဖက်လူကရော ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ခင်ပါရဲ့လားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးမိတယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရင်ဆုံး မေးကြည့်လိုက်ပါ။ …
သမီးပျိုတိုင်းကို ပန်းဦးဆက်ရတဲ့ အရည်းကြီးများအကြောင်း
ပုဂံမြေသည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ထွန်းကား ပြန့်ပွားရာ နေရာဖြစ်သည့်အလျောက်ဘုရားပုထိုးပေါင်းများစွာ တည်ရှိသော အံ့ဖွယ်နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသာသနာတော် တရှိန်ထိုး တိုးတက် ခဲ့သော ပုဂံသမိုင်း၌ လူအများစုအတွေးထဲတွင် အရည်းကြီးတို့၏ အခမ်းကဏ္ဍသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ် ပါဝင်လာသည်။ အရည်းကြီးနှင့်ပတ်သက်လျှင် အနော်ရထာမင်း မတိုင်ခင်ခေတ်နှင့် အနော်ရထာမင်းနောက်ပိုင်းပုဂံခေတ်မှ စတင် ရေးသားရပါမည်။ အနော်ရထာမင်းမတိုင်မှီသည် …